> Resource > Mac > Mac External Hard Drive Guide Recovery
In dunida maanta, drives adag dibadda ayaa la isticmaalo sida qalabka dheeriga ah kaydinta mass u Mac. Waxaa had iyo jeer waa hab wanaagsan oo aad sawiro qiimo leh, videos iyo faylasha kale ee qalab lagu kaydiyo dibadda si aad iyaga meel kasta oo keeni kara. Markaas dhibaatada ka iman kara: Maxaa dhacaya haddii aad si qalad ah tirto faylasha ee drive dibadda u adag? Maxaa dhacaya haddii files yihiin laga badiyay ka formatted drive dibadda u adag? Ama waxa haddii files noqon kharribmay oo aad drive dibadda u adag?
Marka soo food saartay arimaha khasaaro xogta dhibsado, users Mac waydiin karaa, waa ay jiraan xal kasta oo ii in ay sameeyaan Mac kabashada drive adag dibadda? Haddii aad tahay nasiib, waxaa laga yaabaa inaad nuqul raad raac ah oo files lumay, oo aad si fudud u soo celin kartaa nuqul in. Laakiin dhanka kale, waxaad caawinaad weli codsan kartaa barnaamijka drive adag ah Mac dibadda kabashada xogta. Waxaad qaadan kartaa Wondershare Data Recovery for Mac sida isku day ah, ka dibna raac talaabooyinka ay sahlan inuu ka soo kabsado xogta laga Mac drive dibadda adag.
Tani xiiso Mac utility kabashada drive adag dibadda taageertaa drives adag ku dhowaad dibadda ee dhammaan noocyada, oo ay ku jiraan Seagate, LaCie, Western Digital, Maxtor, iwm Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac kor ka link hadda. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista drive dibadda adag on your Mac ka hor soo kabashada.
Fiiro gaar ah Haddii aad tahay user Windows ah, sidoo kale in ka badan halkan waxaad ka heli kartaa version Windows ee Wondershare Data Recovery si ay u qabtaan soo kabashada drive adag dibadda, View: Sida loo sameeyo dib u soo kabashada dibadda drive adag ee computer Windows .
Qabtaan Mac External Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow Mac External Hard Drive Data Recovery
Burcad Wondershare Data Recovery for Mac, ka dibna waxaad heli doontaa interface ah soo socda. Halkan, inuu ka soo kabsado xogta laga Mac drive dibadda adag, ha isku dayno "lumay Recovery File" wada.
Fiiro gaar ah: Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha ku interface si taxadar leh u leedahay in si fiican loo fahmo utility iyo dooro habka ugu wanaagsan ee soo kabashada naftaada.
Tallaabada 2 baarista External Hard Drive u Khasaaray Data
In talaabadan aad dooran kartaa warqad drive aad drive dibadda adag oo guji "Scan" ay soo baadhaan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka formatted drive adag dibadda on your Mac, waxaad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho.
Tallaabada 3 Celinta Xogta laga Max External Hard Drive
Hadda waxaad ku eegaan karo iyo hubi helay waxyaabaha uu furmo suuqa sawirka kadib. Dooranaysaa files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado files recoverable ka overwritten inta lagu guda jiro dib u soo kabashada, fadlan ha ka dooro gal ah ku saabsan Mac si ay u sii.